Babona njani abaPhandi kwaye bacofe kwiziphumo zikaGoogle zokuKhangela | Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 7, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ngaba abaphandi babona njani kwaye bacofe kwiziphumo zikaGoogle kwifayile ye Iphepha lokuKhangela iziphumo (ISERP)? Into enomdla kukuba ayikatshintshi kangangeminyaka- okoko ziziphumo zendalo kuphela. Nangona kunjalo-qiniseka ukuba ufunda iphepha elimhlophe eliphakathi apho bathe bathelekisa ubeko lwee-SERP ezahlukeneyo kunye neziphumo ngaphakathi nganye. Kukho umahluko obonakalayo xa uGoogle enezinye izinto ezibandakanyiweyo kwi-SERP njengee-carousels, iimephu kunye nolwazi lwegrafu yolwazi.
Indawo ekumgangatho ophezulu usafumana i-83% yoqwalaselo kunye ne-34% konqakrazo kwi-SERP.
Umlamli ukufundile oku kwaye wanikezela nge- umzobo omkhulu ezo nkcukacha zonxibelelwano phakathi kwabakhangeli kunye neentengiso ezixhasiweyo, ii-carousels, uluhlu lwasekhaya, kunye noluhlu lwezinto eziphilayo. Cofa kwi-infographic engentla ukuze uyibone iyonke.
Abantu abanxibelelani namaphepha eziphumo ze-injini yokukhangela zikaGoogle ngendlela efanayo naleyo bayenzayo kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ubukhulu becala ngenxa yokwaziswa kwezinto ezintsha kwi-SERP ukongeza kuluhlu lwezinto eziphilayo (iintengiso ezihlawulelweyo, iziphumo ze-carousel, igrafu yolwazi, uluhlu lwendawo njlnjl. ). Apho ngaphambili, abaphandi baya kuthatha ixesha labo ukuskena kuluhlu oluphezulu ngokuthe tye ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, bafunda phantse isihloko esipheleleyo, ngaphambi kokuba behle baye kuluhlu olulandelayo, into esiyibonayo ngoku kukukhawuleza, ukuskena nkqo koluhlu, nabakhangeli bafunda kuphela amagama okuqala ama-3-4 odweliso.
Ngelixa uluhlu oluphezulu lwezinto eziphilayo lubamba phantse inani elifanayo lokucofa njengoko lwenzile kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, ngoku sibona ngaphezulu kwe-80% yawo onke amaphepha acofa enzeka kwindawo ethile ngaphezulu koluhlu lwe-4 lwezinto eziphilayo, oko kuthetha ukuba amashishini kufuneka adweliswe kwenye indawo kule ndawo I-SERP yokwandisa ukugcwala kwabantu kwindawo yabo. URebecca Maynes, uMlamli
Abanye babalaselisa isimilo:
Kuphela yi-1% yabasebenzisi bokukhangela kwi-organic kwiKhasi elilandelayo
I-9.9% yokucofa kwi-SERP yiya kwintengiso ephezulu exhaswa ngemali
I-32.8% yonqakrazo iya ku- # 1 uluhlu lwezinto eziphilayo kwi-SERP
Khuphela i-Whitepaper kaMediative
tags: iglasiizinga lokucofactrisikhundlaindlela yokuziphatha yeinjini yokukhangelaiphepha leinjini yokukhangelaimiphumelaSEOinyokaukucofa i-serpinyoka ctrUluhlu lweenyokaiintengiso ezixhasiweyo